चार महिनाभित्र सामान्य अवस्थामा फर्कनेछाैँ
२०७७ असोज १४ बुधवार
भाद्र १, २०७७ सोमबार
कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमणको असर र जोखिमले मानिसको दैनिक जीवन नै कठिन अवस्थामा धकेलेको छ । दैनिक जीवनका गतिविधि चलायमान नभएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि धक्का लागेको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो रहला र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्नुपर्ला ? लगायत समसामयिक विषयमा गोरखापत्र अनलाइनका पत्रकार मुकुन्द गैरेले अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
– कोरोनाको कारण विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो धक्का दिएको भन्ने बताइन्छ । अब नेपालको महामारीपछिको अर्थतन्त्र कस्तो रहला ?
कोरोनाले विश्वभरिको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पारेको छ । हामी तीनदेखि चार महिनाको बीचमा कोरोना सङ्कटबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन्छौँ भन्ने मेरो अनुमान छ । सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विभिन्न किसिमका कामहरू अगाडि ल्याएको छ । सरकारले राहत प्याकेजदेखि विभिन्न किसिमका सुविधा, छुटहरू मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको छ । यस्तो किसिमको नीतिले उद्योग व्यवसायीहरूलाई राहत मिलेको अवस्था छ ।
होटल, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, यातायातलगायत क्षेत्रमा अनुमान गरेभन्दा बढी असर गरेको पक्कै हो । छिमेकी देशमा व्यापक रुपमा फैलिँदैगएको कारोनाको असर नेपाललाई पनि परेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा योे चार महिनाको अवधिमा असर पारेको भएता पनि अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्र अवस्था राम्रो देखिन्छ । अहिले यो वर्ष मेरो अनुमानमा कोरोना केही महिनाभित्र नियन्त्रणमा आउँछ । कोरोनाले भूकम्पजस्तो भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने काम गर्दैन । जहाँ–जहाँ बढी कोरोनाको प्रभाव बढी छ, त्यस क्षेत्रमा अलि कडा बनाउने र सङ्क्रमण कम भएको क्षेत्रमा सावधानी अपनाएर उद्योग, व्यवसाय खोल्नुपर्छ । पहिला लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा केही असर गरेको भए पनि लकडाउन खुलेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखिन्छ । आशा गराँै, केही महिनाभित्र कोरोनाले पारेको सङ्कट सामान्य अवस्थामा फर्किएसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ ।
नेपालमा फेरि कोरोना सङक्रमण बढेसँगै मानिसले गर्ने गतिविधिमा कडाइ गरेको देखिन्छ ? अब उद्योग व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
अवस्था हेरेर धेरै देशले कोरोनाको चुनौतीका बीचमा पनि उद्योग व्यवसाय चलाएको अवस्था छ । जस्तो इथियोपिया देशले लकडाउन गरेको पाइएन । यस्तै भियतनामले पनि पृथक ढङ्गले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको देखिन्छ । धेरै कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्रमा अलि कडा गर्ने र कम भएको ठाउँमा सुरक्षाका उपाय अपनाएर उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्छ । कोरोना कारण देखाएर उद्योग, व्यवसाय ठप्प पार्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ । सबै ठप्प पारेपछि सरकारले जनतालाई राहत दिनसमेत बजेटको अभाव हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने स्रोत नै खुम्चिएर बाहिरबाट रेमिट्यान्स ठप्प हुँदाको अर्थतन्त्र भयाभह भई जटिल मोडमा जाने खतरा रहन्छ । खास गरी स्वास्थ्य विज्ञसँग सरकारले सुझाव लिएर उनीहरूको समन्वयमा सरकारले सुरक्षा अपनाएर उद्योग व्यवसाय चलाउने रणनीतिमा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
– कोरोनाको यो महामारी बीचमा कस्ता–कस्ता खालका उद्योग व्यवसाय, आयोजना, परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
उद्योग व्यवसायको जोखिम क्षेत्र पहिल्याएर खोल्न सकिन्छ । उद्योगको व्यवसायको क्षेत्र जस्तै, ठूला गौरवका आयोजना, विदेशी आयोजना, निजी निर्माण क्षेत्र, कृषि र साना उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने सकिन्छ । खास गरी गाउँगाउँमा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
– सरकारले लिएका लक्ष्यहरूमा बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
कोरोना महामारी एउटा अप्रत्यासित रुपमा आएको महाविपत्ती हो । यो सरकार वा कसैको नियन्त्रणबाहिर छ । संसारका विकसित देशहरूले कोराना नियन्त्रण गर्न अर्बौ रकम लगानी गरे पनि सोचेअनुसार काम गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । विश्वमा बेरोजगारी त्यतिकै मात्रामा बढेको छ । विश्वको ठूलो देश अमेरिकालयायत छिमेकी देशमा पनि आर्थिक स्थिति खुम्चिँदैगएको छ । सरकारले थोरै समयमा जुन किसिमको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सोचेको थियो, त्यो स्थिति पनि छैन तर अहिले नै निरास हुने अवस्था पनि छैन । अहिले देखिएको खतरालाई सामना गर्दै अगाडि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
– नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान रहँदैआएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू कोरोनाको कारण स्वदेश फर्कन थालेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्कने नेपालीलाई नेपालमा भएको स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने धेरै बाटाहरू छन् । विदेशबाट फर्किनेलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन सकियो भने धेरै रोजगारी दिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यूवाहरूलाई सहुलित ऋण दिएर प्रभावकारी रुपमा अगाडि ल्याउन सकियो भने ठूलो मात्रामा बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
बाँकेमा बुधबार ३४ जना कोरोनामुक्त भएर घर फर्किए
रुपन्देही र कपिलवस्तुमा दुई कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
दशैँ खर्च जुटाउन परम्परागत सीप बेच्दै कैनी समुदायका युवा
अनलाइन कक्षाः अभिभावक र ससाना बालबालिका दुबैलाई सास्ती
बढ्न थाल्यो उपत्यकामा भीडभाड
विश्व भर्चुअल तेक्वान्दो महोत्सवमा खड्का निर्णायकमा
बडादशैँमा भीडभाडका क्रियाकलाप र बोकाबलि निषेध
राजधानीमै जब विद्यार्थीले कक्षामा पाइला टेके (फोटो फिचर)
पीसीआर परीक्षणमा बढी शुल्क असुल्ने आठ नीजि अस्पताललाई २४ घण्टे चेताबनी
कैलालीमा १५६ जनासहित १८४ मा सङ्क्रमण पुष्टि
किसानलाई अलैँची टिप्ने चटारो, भाउ ओरालो
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको पीसीआर रिपोर्ट निगेटिभ
दुई महिनामा १३९ जनामा स्क्रबटाईफस